Ihe dị iche n'etiti ekpochi na unlocked ekwentị dị nnọọ mfe. Ma n'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ndị ka na-adịghị aghọta ụfọdụ isi ihe ndị sitere na-achị akwụkwọ. Ka na-anya na ụfọdụ dị mkpa akụkụ ịghọta ihe dị iche n'etiti ekpochi na unlocked iPhone tinyere usoro Ị kpọghee ekwt ngwaọrụ dị ka mma.
Gịnị mere ọrụ chọrọ ka Ị kpọghee ekwt ha iPhone?
Ọrụ chọrọ ka Ị kpọghee ekwt ha iPhones mere na ha nwere ike itinye a ọhụrụ SIM na-eji na ekwentị netwọk nke ha na-ahọrọ mgbe eweghachiri ekwentị na iTunes.
Olee otú Ị kpọghee ekwt iPhones si dị iche iche mobile netwọk?
Ọtụtụ n'ime ndị na-ebu ga na-arịọ gị n'ihi na ụfọdụ ozi. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe iji jide n'aka na ị maara ihe nọmba akaụntụ metụtara na iPhone, ya mobile nọmba, ngwaọrụ nọmba IMEI, paswọọdụ maka akaụntụ, na ikpeazụ anọ digits nke akaụntụ njide si SSN. Tupu akpọchi gị iPhone, ike azụ-elu maka otu na mgbe ahụ na-eso gị ụgbọelu si akpọchi usoro.
AT & T na-enye ohere iPhone ọrụ igbachi ha igwe mere na ha nwere ga-eji na dị iche iche na netwọk. The nchegbu ngwaọrụ nwere ike-unlocked ma ọ bụrụ na ọ na-adịghị na-aha ka furu efu ma ọ bụ zuru, ma ọ bụ bụghị kọrọ dị ka akụkụ nke ọ bụla fraudulent ọrụ. Bụrụ na ọ bụrụ na iPhone ka-unlocked ka na ya nkwekọrịta oge, onye ọrụ ga-akwụ n'isi nchupu ụgwọ ịkagbu ya / ya nkwekọrịta tupu akpọchi ngwaọrụ. Naanị ụghalaahia nwe nke ngwaọrụ nwere ike ịrịọ maka Kpọghe koodu.
Na-ikpe ma ọ bụrụ na iPhone bụ ịkwụ ụgwọ-dị ka gị-ị-aga ekwentị, ngwaọrụ kwesịrị-arụsi ọrụ ike na netwọk n'ihi na-ala ọnwa isii tupu akpọchi. N'ihi na post-akwụ ụgwọ ahịa, na akaụntụ metụtara na ekwentị kwesịrị arụsi ọrụ ike maka iri isii ụbọchị, na kwa ọnwa ugwo maka nke a oge ka na oge.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụghị AT & T ahịa, ma ị zụrụ iPhone latched na netwọk, ị nwere ike jupụta-elu AT & T si online Kpọghe arịrịọ ụdị. Ụlọ ọrụ ahụ si Rep ga-azụ gị n'ime abụọ ahịa ụbọchị.
The mobile netwọk eziga mobile-Kpọghe nkwenye site email na ọtụtụ ikpe, ọ na-ekwe ahịa na-aga n'ihi ise unlocks kwa afọ. AT & T si ọkachamara ga-eduzi gị na usoro ahụ maka Ịkpọghe ekwentị.
T-Mobile si akpọchi iwu bụ fọrọ nke nta yiri nke AT & T iwu. The nchegbu iPhone ga-latched na T-Mobile, na e kwesịghị kọrọ dị ka furu efu ma ọ bụ zuru. The akaụntụ na mobile ọtụtụ maka nchegbu iOS ngwaọrụ kwesịrị ke ezi nguzo. Plus, na iPhone kwesịkwara-arụsi ọrụ ike na netwọk n'ihi na ihe karịrị 60 ụbọchị.
Ọzọ, onye ọrụ agaghị na-akwụ ụgwọ ọ bụla ebubo maka mobile Kpọghe koodu ọ bụrụ na ekwentị bụ nke nkwekọrịta. Ma ọ bụrụ na ekwentị nọ na nkwekọrịta, onye ọrụ ga-akwụ nkwekọrịta nchupu ụgwọ na ndị ọzọ na ebubo na na ọdabara na akaụntụ.
N'ụzọ dị mwute, na ụlọ ọrụ adịghị anabata Kpọghe koodu arịrịọ online. Mkpa ka ị-akpọ ụlọ ọrụ ma rịọ maka otu. Netwọk dị nnọọ na-enye ohere abụọ unlocks maka onye ọ bụla ahịa kwa afọ. Usoro Ị kpọghee ekwt agụnye inserting ọhụrụ nọ n'ọrụ SIM na SIM oghere na ejikọta na ngwaọrụ iTunes site PC. Ọ dịghị mkpa na-echegbu onwe, dị ka ahịa ọrụ ga-akọwa dum usoro gị.
Netwọk mere ka ọ na akụkọ n'oge February afọ a mgbe ọ na-unlocked niile Apple iPhone 4 na 4S igwe nke mere na ọrụ nwere ike iji ha na ihe ọ bụla GSM na ekwentị mkpanaaka netwọk na ụwa. Dabara nke ọma, niile 4G LTE ngwaọrụ na a na netwọk na-unlocked mode, otú ahụ, ọ bụrụ na ị mezuo ụfọdụ chọrọ, ị nwere ike mfe na-awụlikwa elu ndị ọzọ netwọk gị Verizon handset. Iwu na-fọrọ nke nta ahụ. The akaụntụ metụtara na ngwaọrụ kwesịrị nwere ihe ọ bụla rue mgbe ego. Ekwentị ekwesịghị ke nkwekọrịta, ma ọ bụrụ na ngwaọrụ na-ego site Verizon Edge, ndị niile obere ga-ekpocha.
Verizon-atụ aro, ya niile igwe na-latched na netwọk nanị n'oge mbụ ọnwa iri na abua si zụọ. Mgbe e mesịrị, ọrụ ike na-eji "000000 ma ọ bụ 123456" na Ị kpọghee ekwt ha na ekwentị. Netwọk na-eji CDMA technology, ma ọtụtụ n'ime ya ntị nwere SIM ohere mepere. Ya mere, ha nwekwara ike ga-eji na netwọk ndị ọzọ mgbe akpọchi.
Dị nnọọ ka Sprint ewere iPhones na-nchegbu, ndị a iPhones apụghị ịbụ unlocked na-eji ndị ọzọ na netwọk ekwentị. Ya mere, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịzụta Sprint ewere iPhone, ị ka mma eche echiche ugboro abụọ.
Ọ dị mkpa kpọghee iPhone?
Dị ka e kwuru na mbụ, ọ bụrụ na ị na-achọ iji gị AT & T iPhone na ndị ọzọ netwọk, i kwesịrị Ị kpọghee ekwt iPhone mere na ị nwere ike itinye ndị ọzọ na ụgbọelu si SIM na-eji ya na netwọk.
Agbachi ekwentị nwere ike maa gosi na-enye aka ma ọ bụrụ na ị na-njem esenidụt. Ọ enye gị ohere iji gị iPhone na ihe ọ bụla GSM na netwọk na ụwa.
Ọ bụ iwu kpọghee iPhone?
Ee, ọ bụ iwu kpọghee iPhone ọ bụrụ na ị mezuo niile ibiere setịpụrụ gị ụgbọelu. E nwere ọtụtụ ndị ọzọ weebụsaịtị na ngwa ọdịnala nke pụrụ ịkpọghe gị iPhone enweghị anata akpọchi koodu. Otú ọ dị, ọ bụ ihe amamihe na-anọ n'ebe dị otú ahụ na ngwaahịa. Mgbe niile Ị kpọghee ekwt ngwaọrụ gị iji nri usoro zoro site ngwaọrụ telecom netwọk.
Olee otú itinye gị iPhone n'ime ma ọ bụ Get ya nke Iweghachite ọnọdụ
> Resource> iPhone> Olee Ị kpọghee ekwt iPhone mere na ọ ga-eji na ihe ọ bụla SIM Kaadị